Igbo, John: Lesson 014 - Ihe àmà ndị ọzọ na-akpali akpali banyere Baptizim na Kraist (Jọn 1:29-34) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 014 (Testimonies of the Baptist to Christ)
2. Ihe àmà ndị ọzọ na-akpali akpali banyere Baptizim na Kraist (Jọn 1:29-34)
29 N'echi-ya ọ hu Jisus ka Ọ nābiakute ya, o we si, Le, Nwa-aturu Chineke, Nke nēbupu nmehie nke uwa! 30 Onye a bu Onye mu onwem kwuru okwu bayere Ya, si, Otù Nwoke nābia n'azum Onye ghọworo Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri Onye mbu n'ebe m'nọ.
Mgbe ndị nnọchianya ahụ laghachiri Jerusalem, ha nọgidere na-akwa emo nke Baptizim. Ruo mgbe ahụ onye Baptizim ahụ kwenyere na Kraịst ga-abụ onye nhazi iji mee ka ndị ya dị ọcha, na-afụcha ọka wit ya; Kraịst dị ka iwe iwe Onyenwe anyị, jiri aka ya egbutu osisi ọ bụla nwere ọrịa. Otú a ka nbata nke Kraist ga-ewepụta Ụbọchị Iwe. Mgbe o kwuru, "Mesaya nọ n'etiti anyị", ndị na-eso ụzọ na-agbaghara mmehie ha. Ha chere na Thunderbolt nke ikpe ga-ada na-enweghị ịdọ aka ná ntị.Kraist, onye na-eto eto iri ato na iri abia biara na Baptizim ma jiri nwayo juo ka e mee ya baptism. Obi umeala a dakwasiri onye Baptist, onye kwadoro na Jisos kwesiri ime baptizim ya ma gbaghara nmehie ya. Otú ọ dị, Jizọs nọgidere na-eme baptizim iji mezuo ezi omume.N'ebe a, John ghọtara na Onye Nsọ abịaghị ibibi ihe a kpọrọ mmadụ, kama ka o buru mmehie ha. Ọ nakweere baptizim dịka onye nnọchianya nke mmadụ. Ihe obula nke Onyenwe anyi aghaghi ime na iwe, kama site na ngbaghara.Ka ọ na-eguzo na njedebe nke Ọgbụgba Ndụ Ochie ahụ, Baptist ghọtara omimi nke New n'ime ịhụnanya Chineke. Mgbanwe a dị egwu gbanwere echiche ya.
Na-esote ụbọchị mgbe Jizọs pụtara, Jọn kwuru na Jizọs sịrị, "Lee ma ghọta, mepee anya gị, ọ bụ ya!". Enweghi igwe ebube ma obu agha nke ndi mo-ozi, kama okwu ahu ka ekwuputara ka madu nile nweta. Nwa okorobịa a bụ ogologo oge a na-atụ anya Ya, Onyenwe anyị n'onwe ya, Olileanya nke ụwa.John agakwaghị achọ ka ìgwè mmadụ gbara ya gburugburu na-agbaso Mesaịa ahụ nke ochie, dabere na mmeri ndọrọ ndọrọ ọchịchị na atụmatụ agha.Nke a bụ Nwa Atụrụ Chineke, ọ bụghị Ọdụm a tụrụ anya ya na Juda, dị ike ma merie, ma dị umeala n'obi ma dị nro.N'ịbụ onye jupụtara na mmụọ, Jọn kwupụtara, sị, "Jizọs a na-eweta mmehie nke ụwa, ọ họọrọ ịbụ Nwa Atụrụ Chineke, ihe atụ nke àjà ịchụ àjà oge ochie, o kwesiri ịbụ Onye Nnọchiteanya maka mmadụ nile. Ọ bụ Onye Nsọ ma nọgide na ya mgbe ọ na-ebu mmehie onye ọ bụla. " Onye ahu nke naenweghi nmehie ghọrọ nmehie n'ihi ayi, ibu ezi omume Chineke nime Kraist.
Ihe àmà nke Baptizim bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu na ozioma, isi ihe dị na Bible. Ọ matara na ebube Kraịst bụ ahụhụ ya maka anyị. Nzoputa nke Kraist bu uwa nile na ndi mmadu nile, maka agburu nile, uhie, odo, oji na ocha, ndi gbara ochichiri na ndi mmadu. Ọ na-ewe na ndị na-egbuke egbuke na ndị na-egbuke egbuke, ndị ọgaranya na ndị ogbenye, ndị agadi na ndị na-eto eto, ọ na-enweta maka oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Ọnwụ ọnwụ ya maka mmehie niile. Ihe mgbapụta ya zuru oke zuru okè.
Site n'ubọchi mbu nke ya na-abịa dị ka Nwa Atụrụ ọ tara ahụhụ mmetụta nke ihe ọjọọ, ma ọ bụghị na-achụpụ ndị na-adịghị ma ọ bụ na-eleda ndị mpako, ma hụrụ ha n'anya. Enye ama ọfiọk ofụri ufụn mmọ onyụn̄ ọtọn̄ọ ndikpa ke ntak nnyịn.
Ndị na-ege ya ntị Baptizim ahụ kwusara na Nwa Atụrụ Chineke wepụrụ iwe Chineke n'aka ha. Ọ bụ onye a tara, nwa atụrụ ga-anwụ n'ọnọdụ ha. Ma eleghị anya, ndị nọ na-eche otú otu nwoke pụrụ isi kwụọ ụgwọ maka mmadụ nile. Okwu Jọn meghere anya ha, ma obe amabeghị ha. Ihe omuma a bu imezu atumatu Chineke nime Kraist.
Onye nke Baptizim mekwara ugboro ugboro na Jizọs ga-eme ka nzoputa a zuo ezuo, n'ihi na ọ bụ Onyenwe anyị ebighi ebi, "Ọ ka m karịa, ọ nọ n'ihu m".Ebube Kraịst dị ukwuu, ma ịhụnanya ya n'elu obe kpughere isi nke ebube a. Onye nkwusa ozioma kwupụtara, "Anyị hụrụ ebube ya, ọ kwụgidere n'obe n'ime nsogbu ma si otú ahụ gosipụta ịhụnanya nke na-eme ka anyị nwere onwe anyị".
EKPERE: O Nwa-aturu Chineke nke bu nmehie nke uwa, meere anyi ebere. Ọkpara ebighi ebi nke Chineke, onye aghughọ, gbaghara nmehie ayi. O dị umeala n'obi Nazaret, nke ihere na-emeghị mmehie anyị, anyị na-asọpụrụ gị, n'ihi na ị hụrụ anyị n'anya wee mee ka anyị zuru oke n'ime gị n'obe. Anyị hụrụ gị n'anya ma kelee gị, n'ihi na ị bụghị onye ikpe, mana dị ka nwa atụrụ. Anyị kwenyere na gị, n'ihi na i wepụrụ mmehie nke ndị niile nọ n'ala anyị. Nye anyị amamihe ịgwa ndị ọzọ na ị gbapụtara ha.
Gịnị ka "Nwa atụrụ Chineke" pụtara?